यशैया 41 ERV-NE - परमप्रभु अमर - Bible Gateway
परमप्रभु अमर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ
41 परमप्रभुले भन्नुहुन्छ,
“टाढामा भएका देशहरू, शान्त बन र मकहाँ आऊ।
जातिहरू बालवान होऊ।
मकहाँ आऊ र बोल।
हामी साथ-साथै भेट्नेछौं,
अनि को ठीक हो भनेर निर्णय गर्नेछौं।
2 जो मानिस पूर्वबाट आइरहेको छ उसलाई कसले जगायो?
उसले धार्मिकतालाई उसँग हिँड्न बोलाउँछ।
उसले आफ्नो तरवार चलाउँछ र जातिहरू परास्त गर्छ।
तिनीहरू धूलो जस्ता हुन्छन्।
उसले आफ्नो धनु चलाउँछ र राजाहरूलाई जित्छ
अनि तिनीहरू हावाले पराल उडाए झैं भाग्दछन्।
3 उसले सैन्यहरूको खेदो गर्दछ र कहिल्यै घाइते हुँदैन्।
ऊ कहिल्यै नपुगेका ठाउँहरू पुग्दछ।
4 कसले यी कुराहरू हुने गरायो, कसले यो गर्यो?
कसले प्रारम्भदेखि सारा मानिसहरूलाई बोलायो?
म, परमप्रभुले, यी कुराहरू गरें।
म, परमप्रभु नै प्रथम मानिस हुँ,
अनि जब पृथ्वीमा सारा थोकहरू समाप्त हुन्छन् म यहाँ हुनेछु।
5 तिमीहरू सबै सुदूर ठाउँहरू हेर, अनि डराऊ।
तिमीहरू सबै सुदूर ठाउँहरू,
पृथ्वीमाथि डरले कम्पित हौ।
यहाँ मकहाँ आऊ र ध्यान दिएर सुन्‌।”
अनि तिनीहरू आए।
6 “कर्मीहरू एकार्कामा सहयोग गर्छन् आपस साथ निभाउँदछन्। तिनीहरू बलियो हुनलाई परस्परमा प्रेरणा दिन्छन्।7एकजना कर्मीले मूर्ति बनाउनलाई काठ काट्छ। त्यस मानिसले सुनारलाई प्रेरणा दिन्छ। अर्को एकजना कर्मीले मार्तोल पिटेर धातुलाई चिल्लो पार्दछ। त्यसपछि त्यस कर्मीले लीही चलाउनेलाई प्रेरित गर्दछ। यो अन्तिम कर्मीले भन्दछ, ‘यो काम असल हो, धातु आउने छैन।’ त्यसपछि भूईँमा नखसोस् भनेर त्यसलाई काँटी ठोकेर दरिलो बनाउँदछ ताकि त्यो कहिल्यै नढलोस्। अनि त्यो कहिल्यै नहल्लियोस्।”
परमप्रभुले मात्र हामीलाई बचाउन सक्नु हुन्छ
8 परमप्रभु भन्नुहुन्छ “तिमी इस्राएल मेरो दास हौ,
याकूब मैले तिमीलाई रोजें।
तिमी आब्राहाम परिवारका हौ।
अनि म आब्राहामलाई प्रेम गर्दछु।
9 तिमी टाढा देशमा थियौ,
तर म तिमीकहाँ पुगें,
मैले तिमीलाई त्यो टाढा ठाउँबाट बोलाएँ।
मैले भने, ‘तिमी मेरो दास हौ।’
अनि मैले तिमीलाई रद्ध गरिनँ।
10 सुर्ता नगर, म तिमीसितै छु।
नडराऊ, म तिम्रै परमेश्वर हुँ।
म तिमीलाई बलियो बनाउनेछु।
म तिमीलाई सहायता दिनेछु,
म तिमीलाई मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले समाल्नेछु।
11 हेर, कतिपय मानिसहरू तिमीसँग रिसिएका छन्।
तर तिनीहरू लज्जित हुनेछन्।
तिम्रा शत्रुहरू हराउनेछन् र विलाई जानेछन्।
12 तिमीले ती मानिसहरूलाई खोज्नेछौ जो तिम्रो विरोधीहरू थिए,
तर तिमीले तिनीहरूलाई भेट्टाउनँ सक्ने छैनौ।
ती मानिसहरू जो तिम्रो विरूद्ध लडे
तिनीहरू पूर्ण रूपमा बिलाई जानेछन्।
13 म परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर हुँ।
मैले तिम्रो दाहिने हात समाति रहेकोछु।
अनि म तिमीलाई भन्दछु नडराऊ।
म तिम्रो साथमा हुनेछु।
14 हे बहुमूल्य यहूदा, नडराऊ!
मेरा इस्राएलका प्रिय मानिसहरू, भयभीत न हौ,
म साँच्चि नै तिमीहरूलाई सघाउने छु।”
परमप्रभु स्वयंले ती कुराहरू भन्नु भएको थियो।
“इस्राएलका पवित्र परमप्रभु जसले तिमीलाई बचाए,
उहाँले ती कुराहरू भन्नुभयो।
15 हेर, म तिमीलाई एक झाँट्ने उपकरण बनाउनेछु।
त्यो उपकरण धेरै तीखा दाँतहरू भएका हुनेछन्,
कृषकहरूले यो अन्न कुट्नलाई चलाउने छन्,
यसकारण तिनीहरूले अन्न देखि खोस्टा अलग्गै पार्नेछन्।
तिमी पर्वतहरूमाथि कुल्चिँदै हिँड्नेछौ र तिनीहरूलाई धूलोपीठो पार्नेछौ।
16 तिमीले तिनीहरूलाई बतासमा फ्याँकी दिनेछौ,
अनि तिनीहरूलाई उडाएर लैजाने छ र छरपष्ट पारिदिने छ।
तब तिमी परमप्रभुमा रमाहट हुनेछौ।
तिमी इस्राएलका पवित्र परमप्रभुसँग गर्व गर्नेछौ।
17 “गरीब र दीन-दु:खी मानिसहरूले पानी खोज्नेछन्,
तर तिनीहरूले पाउने छैनन् र पनि तिनीहरू प्यासी छैनन्।
तिनीहरूको जिब्राहरू सुख्खा छन्।
म तिनीहरूक प्रार्थनाको प्रत्युत्तर दिनेछु।
म तिनीहरूलाई त्यसै छोडने छैन र मर्न दिने छैन्।
18 म सुख्खा पहाडहरूमा नदीहरू बगाइ दिनेछु।
म झर्नाको मूल फुटाएर बेंसीहरूमा बगाउने छु।
म पानीले भरिपूर्ण पार्नेछु, मरुभूमिलाई तलाउमा परिर्वतन गर्नेछु।
त्यहाँ सुख्खा भूमिहरूमा झर्नाको पानी हुनेछ।
19 देवदारूहरू मरुभूमिमा उम्रिनेछन्,
त्यहाँ बबुलका रूखहरू, चन्दनका र जैतूनका रूखहरू र धूपीका रूखहरू हुनेछन्।
20 मानिसहरूले ती कुराहरू हेर्नेछन्।
अनि उनीहरूले बुझ्ने छन् कि यी सबै परमप्रभुकै शक्तिले भएका हुन्।
मानिसहरूले यी कुराहरू देख्नेछन्
अनि तिनीहरूले बुझ्न थाल्नेछन कि,
इस्राएलका पवित्र परमप्रभुले यी कुराहरू गरेका हुन्।”
परमप्रभुले झूटा देवताहरूलाई चुनौती दिनुभयो
21 परमप्रभु, याकूबका राजाले भन्नहुन्छ, “आऊ मलाई तिमीहरूका वाद-विवादहरू बताऊ। मलाई तिमीहरूका प्रमाणहरू देखाऊ, अनि हामी ती कुराहरू ठीक रहेछन् भनेर निर्णय गर्नेछौ। 22 तिमीहरूका झूटा देवताहरू आउनु पर्छ अनि के भइरहेछ बताउनु पर्छ।आदिमा के भयो? हामीलाई बताऊ। भविष्यमा के हुने हो? हामीलाई बताऊ। हामी एकदम ध्यान दिएर सुन्नेछौं। तब मात्र हामीहरू जान्नेछौ कि अर्को पल्ट के हुने हो। 23 हामीलाई ती कुराहरू बताऊ जुन के हुने होला हामीले जान्नै पर्छ। तब तिमीहरू वास्तवमा देवताहरू नै हौ भनेर हामी विश्वास गर्ने छौ। केही त गर! जे पनि गर राम्रो वा नराम्रो। तब तिमी जीउँदो नै हौ भनेर हामी देख्नेछौ। अनि हामी तिमीलाई पछ्याउने छौं।
परमप्रभुले प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि उहाँ मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ
25 “मैले उत्तरबाट एकजना मानिसलाई माथि उठाउएको छु।
ऊ पूर्वबाट आइरहेकोछ जहाँबाट सूर्य उदाउँछ।
उसले मेरो आराधना गर्छ।
एकजना कुमाले जसले भाँडा बनाउँछ, हिलो माटोमा हिँड्छ।
त्यस्तै प्रकारले त्यो मानिस राजाहरूलाई मिचेर हिँड्छ।
26 “यस्तो हुन भन्दा अघि हामीलाई कसले भन्यो?
हामीले उनलाई परमेश्वर भनेर घोषणा गर्नुपर्छ।
के तिमीहरूको एउटै मूर्तिले यी कुराहरूको विषय भन्यो र? अँहँ।
ती कुनै पनि मूर्तिहरूले हामीलाई केही पनि भनेनन्।
ती मूर्तिहरूले एउटा शब्द पनि भनेनन्
अनि ती झूटा देवताहरूले तिमीले भनेका शब्दहरू सुन्न सक्तैनन्।
27 सियोनका बारेमा ती कुराहरू भन्ने म, परमप्रभु, नै प्रथम ब्याक्ती थिएँ।
मैले यो समाचार सहित यरूशलेममा सन्देशवाहकहरू पठाएँ
‘हेर, तिम्रा मानिसहरू फर्केर आइरहेछन्।’”
28 मैले ती झूटा देवताहरूमा हेरें।
तिनीहरू केही भन्नलाई कोही पनि
मैले तिनीहरूलाई प्रश्नहरू गरें
तर तिनीहरूले एउटा शब्द पनि भनेनन्।
29 ती सारा देवताहरू वास्तवमा केही पनि होइनन्।
ती मूर्तिहरू पूर्णत महत्वहीन छन्।
तिनीहरूले केही गर्न सक्तैनन्।